I-Nutridieta: iwebhusayithi yakho yokudla ukuze unciphise isisindo | Ukudla kukaNutri | Ukudla kukaNutri
Ukuhamba y ukufaneleka
Imikhiqizo yokunciphisa umzimba
I-Nutridieta: iwebhusayithi yakho yokudla ukuze unciphise isisindo
INutridieta iyi- iwebhusayithi ekhethekile ekudleni ukukusiza wehlise isisindo. Sikutshela konke mayelana nezithako zokudla ezibaluleke kakhulu, kanye nezakhiwo zazo nezinzuzo zempilo yakho. Uma ufuna ukwazi ukudla okuphumelela kakhulu ukunciphisa umzimba, ungaphuthelwa izindatshana zethu.
Ukudla okuphumelela kakhulu
Uma siqala ukubheka, kunokudla okungapheli esinakho. Kepha kwaNutridieta sikulethela okuhle kakhulu ukudla ukunciphisa umzimba nokugcina isisindo sakho. Imibono elula kakhulu ongayisebenzisa, ngaphandle kokubulawa yindlala namathiphu amahle kakhulu ukuze uhlale unesisindo sakho.
Yingakho kuwebhusayithi yethu uzothola ifayela le- izidlo ezidume kakhulu kodwa ngasikhathi sinye, okuphumelela kakhulu futhi okuphephile. Yilabo kuphela abasiqinisekisa ngemiphumela emihle futhi engabeki impilo yethu engcupheni. Uzothola ukuthi ngokugqugquzela okuncane, uzothola leyo ndlela yokususa ama-kilos akho athe xaxa, ngakho-ke lapha uzohlala usesandleni esihle. Njengoba uzothola imenyu elungele isigqi sakho sansuku zonke nokudla okunempilo, okucebe kakhulu nokulula ukukulungisa.
Ukudla okuphansi kwekhalori kwama-calories angu-900
Yehlisa isisindo ngokudla irayisi lenkukhu
Ukudla okumnandi kwamazambane
Ukudla okufanele kuchazwe
Ungasheshisa kanjani imetabolism
Ukudla kwekhalori okungama-400
Ukudla kwekhalori okungu-1500
Ngabe ufuna ukuthola ukudla okuningi?
Qiniseka ukuthi uvakashela isigaba sethu sokudla lapho uzothola khona esivumelana kangcono nezidingo zakho.
Ukudla okuhle kakhulu
Kwesinye isikhathi siyenqena kancane uma sitshelwa Ukuhlanganiswa kokudla ukunciphisa umzimba. Kepha kusukela manje kuqhubeke, sizoshintsha umbono wethu ngabo. Ngoba kwaNutridieta sikukhombisa ukuthi kanjani ngokunye ukudla okuyisisekelo kanye nezinye izithasiselo ongayithola imiphumela obukade uyifuna.
Kwesinye isikhathi sinezithako zokudla ezandleni zethu kodwa asazi ukuthi sizisebenzisa kanjani. Imikhiqizo yemvelo ongayisebenzisa ngokuzethemba okuphelele ukuze uzizwe futhi ubukeke ungcono. Kuwebhusayithi yethu ungabona zonke izibonelo nezincazelo ezicacile esikukhombisa zona ngazo. Uzosusa ukwesaba izithasiselo!
Kusuka kuphekwe kuya ekuphekweni: izindlela ezinempilo kakhulu zokudla amaqanda
Sikutshela ukuthi iyini i-edamame, izakhiwo zayo nokuthi ithathwa kanjani
Ukudla okuthambisa isisu
Ama-burner wemvelo wemvelo
Ngabe ufuna ukuthola izithako ezingaphezulu zokudla okunempilo?
Esigabeni sethu somsoco uzothola ukudla okuningi okunezinto ezinhle ezizokusiza ulahlekelwe isisindo noma uthuthukise impilo yakho. Uyabazi bonke?
Bona izithasiselo eziningi zokudla okunempilo
Hlola iwebhusayithi yethu
Gqoka a indlela yokuphila enempilo kungenzeka inqobo nje uma sinezeluleko ezinhle noma imihlahlandlela yokwenza kwenzeke. Ngalesi sizathu, eNutridieta uzothola uchungechunge lwezigaba eziphelele, ongazisebenzisa ngenkathi unakekela impilo yakho nokulawula isisindo sakho. Ngakolunye uhlangothi, ungakujabulela ukudla okuphephe futhi okunokulinganisela okuhambisana nempilo yakho.
Vele, ngakolunye uhlangothi, kuwebhusayithi yethu uzothola konke imininingwane edingekayo ngokudla lokho kwesinye isikhathi kusetafuleni lethu, kepha asazi kahle. Ubuhle bayo, izinzuzo nezakhiwo kuzofaka imininingwane eminingi yalolu lwazi. Ngabo, sikusiza ukuthi ulungiselele izindlela zokupheka ezimnandi, ngoba ukudla okunempilo akudingeki kube yisicefe.
Siphinde sikhulume amathiphu wezempilo kanye nezifo ezithile, ukuze ube nalo lonke ulwazi olusha futhi uthinte lokho kungabaza okuqubuka kwesinye isikhathi ezingqondweni zethu. Vele, asikhohlwa ukuvivinya umzimba okunempilo, kanye nemidlalo enconywe kakhulu nemikhiqizo noma izengezo ezizonikeza umzimba wakho ngalokho okudingayo ngempela, njalo ngesisekelo semvelo.
Ngezansi uzothola uhlu lwazo zonke izigaba esibhekana nazo I-Nutridiet:
Ungaphuthelwa izindaba zakamuva esizishicilele kubhulogi lethu lokudla.
Ama-croquette amagugu ase-Iberia
Ngabe ufuna ukubona ukushicilelwa kwethu kwakamuva kokudla?
Ungaphuthelwa izindatshana zakamuva kubhulogi lethu lokudla